China Auto ranon-javatra famenoana & famonoana milina fanamboarana sy orinasa | tampon
Milina fonosana mitsangana ho azy
Mpifangaro vodilanitra roa
Masinina fanamarihana mandeha ho azy Ho an'ny tavoahangy boribory
Masinina famenoana & famonoana rano
Masinina fonosana paosy Rotary
Ity milina famonoana rotary mandeha ho azy ity dia natao hamenoana ireo vokatra E-ranoka, crème ary saosy ao anaty tavoahangy na siny, toy ny menaka azo hanina, shampooing, detergent misy rano, saosy voatabia sns. Ampiasaina betsaka izy io amin'ny famenoana tavoahangy sy siny misy volume, endrika ary fitaovana samihafa.
Ity milina famonoana rotary mandeha ho azy ity dia natao hamenoana ireo vokatra E-ranoka, crème ary saosy ao anaty tavoahangy na siny, toy ny menaka azo hanina, shampooing, detergent misy rano, saosy voatabia sns. Ampiasaina betsaka izy io amin'ny famenoana tavoahangy sy siny misy volume, endrika ary fitaovana samihafa. Izy io dia azo namboarina mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifanay. Azontsika atao koa ny manampy azy amin'ny milina fanefena, milina fanoratana, na fitaovana fanodinana hafa aza mba hahavitana azy tanteraka.
Ny masinina dia mandray maotera servo motera, ny kaontenera dia halefa any amin'ny toerana, avy eo ny lohan'ny fameno dia hilentika ao anaty fitoeram-bokatra, ny famenoana ny volony ary ny fotoana famenoana dia azo apetraka milamina. Rehefa fenoy hatramin'ny fenitra ilay izy dia miakatra ny motera servo, halefa ny kaontenera, vita ny tsingerina miasa iray.
■ Fifanarahana amin'ny masinin-olombelona mandroso. Ny habetsaky ny famenoana dia azo apetraka mivantana ary ny data rehetra dia azo ahitsy sy hotehirizina.
■ Ny fitondrana motera servo no mahatonga ny famenoana avo kokoa.
■ Piston vy tsy misy fangarony homocentric tonga lafatra no mahatonga ny masinina misy fetra avo lenta sy fiainana miasa amin'ny peratra famehezana.
■ Ny ampahany mifandraika amin'ny materialy dia vita amin'ny SUS 304. Ny fanoherana ny harafesina ary mifanaraka tanteraka amin'ny fenitry ny fahadiovana ara-tsakafo.
■ Fampiasana anti-foam sy bocam.
■ Ny piston dia fehezin'ny motera servo ka ny fahamarinan'ny famenoana ny nozzles famenoana dia hilamina kokoa.
■ Ny haingam-pandeha famenoana masinina famenoana varingarina dia raikitra. Saingy azonao atao ny mifehy ny hafainganam-pandehan'ny hetsika famenoana tsirairay raha mampiasa ny milina famenoana maotera servo.
■ Azonao atao ny mitahiry maromaro ny masontsivana amin'ny masininay famenoana tavoahangy samihafa.
Karazan-tavoahangy plastika / fitaratra isan-karazany
Haben'ny tavoahangy *
Min. Ø 10mm Max. Ø80mm
Screw Alternative amin'ny cap, alum. Satroka ROPP
Size habe *
1 lohany (azo ampanjifaina loha 2-4)
15-25bpm (oh: 15bpm @ 1000ml)
Volana famenoana hafa *
Mameno ny marina
220V 50 / 60Hz 1.5kw
Mila rivotra ny famatrarana
Masinina haben'ny mm
Ny halavany 3000mm, ny sakany 1250mm, ny haavony 1900mm
Miaraka amin'ny tontonana fanaraha-maso ny efijery, mila miditra fotsiny ny isa hametrahana fangalana ny mpandraharaha, mahatonga azy io ho mora kokoa amin'ny fifehezana ny masinina, mamonjy fotoana amin'ny milina fitiliana.
Natao tamina fantsom-pamenoana pneumatic, dia mety amin'ny famenoana ranoka matevina toy ny menaka manitra, menaka manitra, menaka manitra. Ny nozatra dia azo ampanjifaina arakaraka ny hafainganan'ny mpanjifa.
Ny rafitra famahanana satroka dia handamina satroka, satroka fahana mandeha ho azy hahatonga ny milina hiasa milamina. Ny feeder cap dia haingoina mifanaraka amin'ny filanao.
Ny chuck dia manamboatra ny tavoahangy hampihodina sy hanenjanana ny satrony tavoahangy. Ity karazana fomba fanakanana ity dia mahatonga azy ho mety amin'ny karazana satroka tavoahangy isan-karazany toy ny tavoahangy famaohana, tavoahangin-drano, tavoahangy mitete.
Fitaovana maso elektrônika avo lenta, ireo dia natao hamantarana tavoahangy sy hifehezana ny mekanisma tsirairay an'ny milina hiasa na hanomanana ny fizotrany manaraka.
1. Fitaovana famahanana satroka hafa
Raha tsy afaka mampiasa takelaka mihetsiketsika ny satrokao mba hisorohana sy hamahanana sakafo dia misy ascenseur cap.
2. Latabatra fihodinan'ny tavoahangy
Ity latabatra fihodinan'ny tavoahangy ity dia latabatra miasa mavitrika miaraka amin'ny fifehezana matetika. Ny fomba fiasa: apetaho amin'ny tavoahangy boribory ny tavoahangy, avy eo ahodina ny rotaka mba hanindrona tavoahangy amin'ny fehikibo, atomboka ny fandrakofana rehefa alefa ao anaty masinina ny tavoahangy.
Raha lehibe ny savaivon-tavoahanginao / tavoara dia azonao atao ny misafidy latabatra mihodina tsy refesi-maso lehibe, toy ny savaivony 1000mm, savaivony 1200mm, 1500mm savaivony. Raha kely ny savaivonan'ny tavoahanginao / tavoahangy dia azonao atao ny misafidy latabatra fihodinam-bato tsy mitongilana kely, toy ny savaivony 600mm, savaivony 800mm.
3. Na milina tsy mitongilana mandeha ho azy
Ity milina fanodinana tavoahangy mandeha ho azy ity dia manamboatra tavoahangy boribory mandeha ho azy ary mametraka ireo kaontenera amin'ny mpampita amin'ny hafainganam-pandeha hatramin'ny 80 cpm. Ity masinina tsy milamina ity dia mandray ny rafitra elektronika. Mora sy milamina ny fandidiana. Ilaina be io amin'ny sehatry ny fivarotam-panafody, sakafo sy zava-pisotro, fikolokoloana tarehy ary fikarakarana manokana.
4. Masinina fanamarihana
Ny milina fanoratana mandeha ho azy natao ho an'ny tavoahangy boribory na vokatra hafa misy varingarina mahazatra. Toy ny tavoahangy plastika vita amin'ny tavoahangy, tavoahangy fitaratra, tavoahangy vy. Ampiasaina amin'ny fametahana marika amin'ny tavoahangy boribory na kaontenera boribory amin'ny sakafo sy zava-pisotro, fanafody ary indostria simika isan'andro.
■ Fametahana taratasy fametahana fametahana tena eo ambonin'ny vokatra, radia na latabatra lehibe ambonin'ny vokatra.
■ Vokatra azo ampiharina: tavoahangy toradroa na fisaka, satrony tavoahangy, singa elektrika sns.
■ Labels Azo ampiharina: sticker vita amin'ny adhesive ao anaty horonana.
1. Hamaly ny fanontanianao izahay ao anatin'ny 12 ora.
2. Fotoana fiantohana: 1 taona (ampahany lehibe ho anao malalaka ao anatin'ny 1 taona, toy ny motera).
3. Handefa ny boky torolàlana momba ny fampianarana Anglisy izahay ary handefa horonantsary an'ilay milina ho anao.
4. Serivisy aorian'ny fivarotana: Hanaraka ny mpanjifanay foana izahay aorian'ny fivarotana ny milina ary afaka mandefa teknisianina any ivelany hanampy anao hametraka sy hanitsy ny masinina lehibe koa raha ilaina izany.
5. Fitaovana: Izahay dia manome ny vidin-tsolika amin'ny vidin'ny fifaninanana rehefa ilainao izany.
1. Misy injeniera ve afaka manompo any ivelany?
Eny, fa ianao no tompon'andraikitra amin'ny saran-dalana.
Mba hitehirizana ny vidinao dia handefa horonantsary feno fametrahana masinina antsipirihany izahay ary hanampy anao hatramin'ny farany.
2. Ahoana no ahafahantsika mahazo antoka momba ny kalitaon'ny milina aorian'ny fametrahana ny baiko?
Alohan'ny hanaterana dia halefanay aminao ny sary sy horonan-tsary ho anao hijerena ny kalitaon'ny milina.
Ary azonao atao ihany koa ny mandamina ny fizahana kalitao amin'ny alàlan'ny tenanao na amin'ny alàlan'ny fifandraisanao any Shina.
3. Matahotra izahay sao tsy halefanay aminay ilay masinina aorian'ny fandefasanay ny vola?
Manana ny fahazoan-dàlana sy taratasy fanamarinana izahay. Ary azo ampiasaina ho antsika hampiasa serivisy fiantohana ara-barotra Alibaba, manome antoka ny volanao, ary miantoka ny fandefasana ara-potoana sy ny kalitaon'ny milina anao.
4. Azonao atao ve ny manazava amiko ny fizotry ny fifanakalozana manontolo?
1. Manaova sonia ny faktiora amin'ny fifandraisana na Proforma
2. Alamino ny fametrahana petra-bola 30% amin'ny orinasa misy anay
3. Orinasa mandamina famokarana
4. Fitsapana & fitiliana ny milina alohan'ny fandefasana
5. Notsidihin'ny mpanjifa na masoivoho fahatelo tamin'ny alàlan'ny fitsapana an-tserasera na an-tranonkala.
6. Alamino ny fandoavam-bola alohan'ny fandefasana.
5. Hanome ny serivisy fanaterana ve ianao?
Ie. Azafady mba ampahafantaro anay ny toerana halehanao farany, hizaha ny sampan-draharahan'ny fandefasana entana izahay mba hanonona ny vidin'ny fandefasana ho an'ny referansa alohan'ny fandefasana. Manana orinasam-pitaterana entana izahay, ka tombony kokoa ihany koa ny entana. Any UK sy Etazonia dia nanangana ny sampana misy anay, ary ny UK sy Etazonia dia miasa mivantana mivantana amin'ny ladoany, mahafehy ny loharanon-tànana voalohany, manafoana ny tsy fitoviana amin'ny vaovao ao an-trano sy any ivelany, ny dingana rehetra amin'ny fivoaran'ny entana dia afaka mahatsapa tena- fanarahana ny fotoana. Manana orinasam-pandraharahana sy orinasan-tsarimihetsika manokana ny orinasan-tserasera mba hanampiana ny entana hanadio haingana ny fadin-tseranana sy hanaterana entana, ary hahazoana antoka fa tonga soa aman-tsara sy ara-potoana ny entana. Ho an'ireo entana aondrana any Angletera sy Etazonia, ireo consignant dia afaka manontany anay raha misy fanontaniana na tsy azony. Hanana mpiasa matihanina izahay hanome valiny feno.
6. Mandra-pahoviana no mitarika ny fotoana ny milina famenoana sy famenoana fiara?
Ho an'ny milina famenoana sy famonoana mahazatra, ny fotoana itarihana dia 25 andro aorian'ny nahazoanao ny vola aloanao. Mikasika ny masinina namboarina dia manodidina ny 30-35 andro ny fotoana fitarihana aorian'ny nahazoanao ny vola apetrakao. Toy ny manamboatra motera, manamboatra asa fanampiny, sns.
7. Ahoana ny momba ny serivisin'ny orinasanao?
Izahay Tops Group dia mifantoka amin'ny serivisy mba hanomezana vahaolana tsara indrindra ho an'ny mpanjifa ao anatin'izany ny serivisy alohan'ny varotra sy ny serivisy aorian'ny fivarotana. Manana milina fitahirizana entana ao amin'ny efitrano fampisehoana izahay hanaovana andrana hanampiana ny mpanjifa mandray fanapahan-kevitra farany. Ary manana agents koa izahay any Eropa, afaka manao fitsapana amin'ny tranokalanay izahay. Raha mametraka kaomandy avy amin'ny masoivohitray Eraopa ianao, dia afaka mahazo serivisy aorian'ny fivarotana amin'ny toerana misy anao. Izahay dia miahy mandrakariva ny famahanana sy ny fametahana ny milina ary ny serivisy aorian'ny varotra dia eo anilanao hatrany hahazoana antoka fa mihazakazaka tonga lafatra ny zava-drehetra miaraka amin'ny kalitao sy ny fahombiazany azo antoka.
Mikasika ny serivisy aorian'ny varotra, raha toa ka mametraka baiko avy amin'ny Shanghai Tops Group ianao, ao anatin'ny fiantohana herintaona, raha toa ka misy olana ny masinina mameno sy misimisy, dia halefanay maimaim-poana ireo ampahany ho an'ny fanoloana, ao anatin'izany ny sarany mazava. Aorian'ny fiantohana, raha mila faritra hafa ianao dia homenay anao ny vidiny miaraka amin'ny vidiny. Raha sendra misy ny lesoka ao amin'ny masininanao ianao dia hanampy anao hiatrika izany amin'ny voalohany, handefa sary / horonan-tsary ho fitarihana, na horonantsary mivantana an-tserasera miaraka amin'ny injenieranay ho fampianarana.
8. Manana fahaizana mamolavola sy manolotra vahaolana ve ianao?
Mazava ho azy, manana ekipa mpamorona matihanina sy injeniera za-draharaha izahay. Ohatra, raha miavaka ny tavoahanginao / tavoahanginao dia mila mandefa ny santionanao amin'ny tavoahanginao sy ny satronao ianao, dia hamolavola anao izahay.
9. Inona ny tavoahangy / jar afaka mameno ny masinina?
Izy io dia mety indrindra amin'ny boribory sy toradroa, endrika tsy fitoviana Glass, Plastika, PET, LDPE, HDPE tavoahangy, mila manamafy amin'ny injenierantsika. Ny hamafin'ny tavoahangy / tavoahangy dia tsy maintsy azo fehezina, na tsy afaka mamily mafy.
Indostrian'ny sakafo: karazan-tsakafo rehetra, tavoahangy / tavoara manitra, tavoahangy fisotro.
Indostrian'ny fivarotam-panafody: tavoahangy / tavoahangy fikarakarana ara-pahasalamana sy fitsaboana isan-karazany.
Indostrian'ny simika: karazan-tavoahangy fikolokoloana sy tarehy rehetra.
10. Ahoana no hahazoako ny vidiny?
Matetika izahay dia mitanisa ao anatin'ny 24 ora aorian'ny hahitanay ny fanontanianao (Afa-tsy ny faran'ny herinandro sy ny fialantsasatra). Raha maika be ianao hahazo ny vidiny, dia andefaso mailaka izahay, na mifandraisa aminay amin'ny fomba hafa, mba hahafahanay manolotra teny nindramina ho anao.
Teo aloha: Masinina fonosana paosy Rotary
Manaraka: Masinina fanamarihana mandeha ho azy Ho an'ny tavoahangy boribory